भर्खरै झापाबाट अायो सबैलार्इ रूवाउने यस्तो दुःखद खबर – PathivaraOnline
Home > समाचार > भर्खरै झापाबाट अायो सबैलार्इ रूवाउने यस्तो दुःखद खबर
भर्खरै झापाबाट अायो सबैलार्इ रूवाउने यस्तो दुःखद खबर
२६ भदौ, काठमाडौं । झापाको गौरीगञ्ज गाउँपालिका–६, बाह्रदशीमा एक जना कपडा व्यवसायीको हत्या भएको छ । कमल गाउँपालिका–६, मंगलबारेका ३८ वर्षीय खेमराज पौडेलको हत्या भएको हो । छुरा प्रहार गरेर उनको हत्या भएको देखिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय, झापाले जनाएको छ ।
‘कपडा व्यवसाय गर्दै आएका पौडेलको शव भेटिएपछि म आफैं पनि अहिले गौरीगञ्ज आइपुगेको छु’, झापाका प्रहरी प्रमुख एसपी भीमप्रसाद ढकालले अनलाइनखबरसँग भने, ‘एक जनालाई पक्राउ परेका छन् । इलाका प्रहरी कार्यालय, गौरीगञ्जमा उनलाई राखेर अनुसन्धान गरिरहेका छौं ।’
स्रोतका अनुसार पक्राउ पर्नेमा पौडेलका व्यवासयिक साझेदार श्रदाम हुसेन छन् । लेनदेनको विवादमा हुसेनले उनलाई छुरा प्रहार गरेको हुन सक्ने प्रहरीको प्रारम्भिक आशंका छ ।
‘सोमबार रातिदेखि हराएका पौडेल अन्तिम पटक उनै हुसेनलाई भेट्न गएका थिए’, झापा प्रहरीका डिएसपी जितेन्द्र बस्नेत भन्छन्, ‘उनीसँग लिन बाँकी रहेको पैसा दिनलाई बोलाएपछि पौडेल हुसेनलाई भेट्न गएको देखिन्छ ।’
यद्यपि, हालसम्म हुसेनले किन छुरा प्रहार गरे भन्ने विषय खुलिसकेको छैन । बस्नेत भन्छन्, ‘अनुसन्धान जारी छ । चाँडै तथ्य सार्वजनिक हुन्छ ।’
प्रहरीले पौडेलको शव भेटिएको ठाउँमा अपराधमा प्रयोग भएको छुरा, मे ७ प १९०४ नम्बरको मोटरसाइकल, मोबाइल लगायतका सागम्री पनि फेला पारेको छ ।
प्रारम्भमा पौडेलको अपहरण भएको प्रहरीले सूचना पाए पनि घटनाक्रमले उनको अपहरण भएको संकेत नदेखाएको एक अनुसन्धान अधिकारी बताउँछन् ।
लोकतन्त्रकाे खिल्ली उडाउँदै शक्तिकाे दुरूपयोग गरेर पत्रकारलार्इ हत्कडी! कतिसम्म जायज?
नेपालमा कोरोना संक्रमित सबै निको हुने क्रममा
माग्नेबुढाले गरे प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिलाई व्यंङ्ग्य, ‘बा ले मध्यरातमा ठोक्नुभएछ, आमाले विहानीपख